को कपास चकलेट र पपकर्न लागि उपकरण: समीक्षा
राम्रो मौसम, पार्क मा हिड्ने कपास चकलेट - र एक राम्रो जैविक तस्वीर, छैन यो छ? सडकमा मा गर्मी को आगमन संग थप सानो छन् stalls, जहाँ ग्राहक तयार पपकर्न र कपास चकलेट हुँदा। यस्तो भोजमा चाँडै तयार छ, यो छ सुविधाजनक छ र यो साँच्चै विशेष गरी यदि तपाईं बच्चाहरु हिंड्न, को अवकाश समय उज्यालो। मौसमी बनाउन एक अद्भुत तरिका - सडक बिक्री कपास चकलेट र पपकर्न। यस लेखमा हामी अन्तिम उत्पादन सिर्जना को सिद्धान्त बारेमा थप भन्नेछु उपकरण, ब्रान्डहरु र आपूर्ति मा।
कपास चकलेट र पपकर्न बनाउन को लागि कच्चा माल
तपाईं गरिब गुणस्तरीय कच्चा माल खर्चहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि, पनि सबैभन्दा महंगा र उच्च गुणस्तरीय कपास चकलेट र पपकर्न बनाउन को लागि उपकरण, कार्य सामना छैन।
पपकर्न द्वारा विशेषता छन् जो मकै विशेष ग्रेड देखि बनेको छ:
पत्ता लगाउने को डिग्री। वजन को अनुपात रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संकेतक को एक निर्भर र समाप्त उत्पादन को मात्रा।
अनुपात खोल्न र, Unopened अनाज। साना उत्तरार्द्ध, तल्लो उत्पादन को लागत।
चिस्यान। अपराध पत्ता लगाउने नकारात्मक प्रभाव को एक उच्च प्रतिशत - यो 14% भन्दा बढी हुँदैन।
बल। एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक पनि पपकर्न कर्मेल लेपित छ भने वा गर्दा भण्डारण।
पपकर्न विशेष वनस्पति तेल प्रयोग को लागि - यो तत्संबंधी अक्सर शुद्ध कोका घिउ वा मिश्रण छ। मुख्य घटक - बलिरहेको र धूवा बिना उच्च तापमान मा काम को संभावना।
विशेष मिश्रण थप स्वादिष्ट पपकर्न महत्तव दिनकै प्रयोग गरिन्छ। को संरचना आधारमा, मकै चलनअनुसारको नूनिलो स्वाद, वा कर्मेल, चकलेट, बेरी र टी प्रदान गर्न सक्छन्। डी
कच्चा सामाग्री, उपकरण candyfloss, तुच्छ प्रयोग गर्ने - नियमित चीनी। उत्पादन स्वाद समृद्ध गर्न स्वाद प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले रंजक र सुगंध को एक मिश्रण हो। काम अनुपात -2Tbsp। चम्मच 4.5 किलो चिनी।
पपकर्न कसरी खाना पकाउनु?
छोटो र बलियो ताप पछि साथै Topping आधारित पपकर्न सिर्जना (मिठाई वा दिलकश)। निम्नानुसार कार्यहरू औसत अनुक्रम छ:
पूर्ण एकाइ, सँगैको दस्तावेज ध्यान इकट्ठा;
पपकर्न बनाउन लागि मिसिन खोल्नुहोस्।
4-6 मिनेट (जब पहिलो चालू मात्र आवश्यक) को लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
एक विशेष बयलर 57 ग्राम तेल पपकर्न राख्नु (नरिवल मा सामान्यतया आधारित)। तेल वजन ड्राई अन्न को वजन को एक-तेस्रो बारे हुनुपर्छ।
ड्राई अन्न (168-170 ग्राम) मा तेल थप्नुहोस्।
.. 85 ग्राम, अर्थात्, अनाज को आधा वजन - अन्न पूरक स्वाद मीठो थप्नुहोस्। तपाईंलाई एउटा विशेष नुन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो 5-7 ग्राम (1 चम्मच) आवश्यक हुनेछ।
को बयलर टोपी बन्द, को पपकर्न पूर्णतया प्रकट सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
यस पट झुकाव र यो अनाज रहने छैन भन्ने निश्चित गर्नुहोस्।
बिक्री पूरा गर्न, यी चरणहरू रूपमा आवश्यक धेरै पटक रूपमा दोहोर्याउनुहोस्।
पछिल्लो को तयार बनाएको मकै pripodnimut आवरण बयलर रूपमा बित्तिकै लोड हुन्छ, बन्द गन्ध जल बच्न गर्मी बारी।
कसरी कपास चकलेट तयार?
कपास चकलेट को उत्पादन को लागि प्रयोग पेशेवर उपकरण, तपाईं सजिलै यो भोज कसरी पकाउन गर्न सिक्न सक्छन्। एक सानो कौशल र पनि खाद्य फूल तपाईं विषय हुनेछ। निम्नानुसार सञ्चालनको समग्र सिद्धान्त हो:
पूर्ण एकाइ, सँगैको दस्तावेज ध्यान इकट्ठा।
चिसो पानी कचौरा मा कपास चकलेट को प्लास्टिक लाठी ठाँउ - सतह काम नम हुनुपर्छ गर्दा, अन्यथा ऊन छडी छैन।
लगभग 4.5 V पोख्नुहोस्। चीनी को चम्मच। इच्छित यदि तपाईं, चीनी स्वाद संग preblended गर्न सकिन्छ।
टाउको को परिक्रमा सुरु बटन गर्नुहोस्, र गर्मी को एक न्यूनतम मा सेट। माथि गर्मी र बिस्तारै चीनी पगाल्न तेंग सुरु हुनेछ।
तपाईँले सुन्न रूपमा crackling र कर्मेल को गन्ध देखिन्छ हावा मा - तपाईं काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
कपास चकलेट लागि उपकरण तपाईं एक छडी मा जम्मा गर्न छ कि गरम फाइबर कर्मेल सिर्जना गरिनेछ - एक गरेर कन्टेनर एक देखि लाठी बाहिर पुल र केसिङ साथ यो rotational गति बनाउँछ।
तपाईंले चाहेको आकार ऊन को 79-80% reeled छन् - को ताप तत्व विच्छेद। कपास फाइबर को पनि 12-16 सेकेन्ड तपाईं काम पूरा गर्न अनुमति दिने, मेशिन बाट प्रस्थान गर्नेछ।
सोझो स्थिति विशेष ऊन खरीदार सेवा!
चीन देखि सडक खाना को तयारी को लागि उपकरण
को कपास चकलेट र पपकर्न, चीन बनेको को तयारी मा प्रयोग गरिन्छ कि उपकरण को सबै भन्दा। यो प्रविधी आकर्षक उपस्थिति र धेरै किफायती मूल्य द्वारा विशेषता छ।
उत्पादन यस प्रकार बेच, चीन प्रौद्योगिकी देखि सडक बिक्रेताबाट प्रतिक्रिया एक सिजन लागि डिजाइन गरिएको छ। ई उपकरण को कपास चकलेट र पपकर्न मिड-वसन्त बिक्रि लागि, यो intensively सम्पूर्ण अवधि शरद ऋतु को अन्त सम्म काम गरिरहेको छ, र त्यसपछि खारेज गरियो।
यस्तो कार्यहरू चिनियाँ उत्पादन को पहनने प्रतिरोध को एक कम स्तर सम्बद्ध - मरम्मत अन्ततः नयाँ उपकरण भन्दा बढी लागत। र पछि सबै निवेश नै भुक्तानी हुनेछ, विक्रेता, लाभ गरे र अर्को सिजन कार्य सम्पूर्ण चक्र बारम्बार लागि तयार छ।
: निम्न निर्माताहरु सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड
व्यापारीहरू, काम गुणस्तर, कायम राख्न र सेवा हस्तक्षेप आवश्यक छैन सजिलो समीक्षा अनुसार ती सबै।
को कपास चकलेट र पपकर्न लागि उपकरण। रूस
माग सधैं स्वाभाविक प्रस्ताव छ, र रूसी निर्माताहरु छोडेर छैन। कपास चकलेट बनाउन को लागि उपकरण सोभियत संघ मा अस्तित्व, त्यसैले तिनीहरू हैरानी थियो, तर पपकर्न खाना पकाउने लागि प्रविधी संरचनात्मक सञ्चालन समय पश्चिमी समकक्षों उपयोग, सीमा थपियो। विशेषज्ञहरु निम्न ब्रान्डहरु को दायरा ध्यान सिफारिस:
तिनीहरूले जो तपाईं प्रत्येक व्यक्ति वस्तु लागि व्यक्तिगत समाधान चयन गर्न अनुमति दिन्छ विभिन्न क्षमता को उपकरण, प्रस्ताव।
प्रयोगकर्ता अनुसार, कपास चकलेट र पपकर्न रूसी उत्पादन लागि उपकरण चिनियाँ समकक्षों भन्दा अधिक महंगा छ, तर राम्रो गठन गुणस्तर र उच्च स्थायित्व छ। यी सबै सुविधाहरू तपाईं गुणवत्ता को हानि बिना वर्ष रूस देखि कम्पनीहरु को उत्पादन मा काम गर्न अनुमति दिन्छ। हो, समय समयमा सेवा हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर यसलाई बरु मर्मत गर्न भन्दा, नियमित मर्मतका लागि थप सम्बन्धित छ।
कपास चकलेट र पपकर्न को उत्पादन को लागि उपकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका
Objectively, उत्कृष्ट र सबै भन्दा विश्वसनीय प्रविधी संयुक्त राज्य अमेरिका देखि सडक मूल खाना को निर्माण को लागि।
ठ्याम्मै कारीगरी र उपभोग्य, आकर्षक उपस्थिति। माइनस एक - उच्च मूल्य।
तपाईं समाप्त उत्पादन को ठूलो परिमाणमा लागि स्थिर मांग अनुभव छ भने अमेरिकी उपकरण अधिग्रहण, कि मामला मा जायज छ। यो भन्दा मनोरञ्जन केन्द्र, सिनेमाहरू, आदि को मालिक देखि आवश्यक छ भने यो तपाईंको लागि लागू हुन्छ, हामी ब्रान्डहरु ध्यान गर्न सिफारिस ..:
कपास चकलेट र पपकर्न को उत्पादन को लागि सबै भन्दा उच्च गुणस्तरीय उपकरण। यसलाई आफ्नो प्रदर्शन गुमाउने बिना दशकसम्म गर्दछ।
अन्तिम प्याकेजिङ्ग र बिक्री
त्यसैले, तपाईं कपास चकलेट लागि उपकरण खरिद गरेका छन्। उत्पादकहरु को समीक्षा र तपाईं सुहाउने उपकरण चयन गर्न। अन्तिम उत्पादनको लागि हामी तयार पारे। ग्राहकहरु दिने अघि आफ्नो प्याकेजिङ्ग मा?
अनाज, पूरक, आदि, यसको दायरामा लागू र अक्सर आपूर्तिकर्ता प्याकेज समावेश गर्नुहोस्। पपकर्न यो हुन सक्छ:
गत्ता कप। सबै भन्दा लोकप्रिय वी-24, वी-32 को मोडेल छन्। तिनीहरूले 9-10 वर्ष देखि बच्चाहरु को लागि ह्यान्डल गर्न सजिलो हुनेछ।
चिल्लो प्रतिरोधी कागज बैग। लघु, पूर्ण साना छोराछोरीलाई लागि उपयुक्त।
कपास चकलेट विशेष प्याकेजिङ्ग आवश्यक छैन - यो खण्डमा जो एक छडी सबै सीमित।
पपकर्न, एक कार्यशाला मा निर्मित गर्न सकिन्छ चिप्स संग एक बराबर, र अन्य नाश्ता मानक प्याकेजहरू मा पैक र रिटेल आउटलेट मा बेचे।
यो गतिविधि वृद्धि उत्पादकता संग अधिक राम्ररी प्रविधी implies - केवल एक राम्रो संकुचित सीधा काम रैक मा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने उपकरणहरू र पूर्ण उत्पादन लाइनहरु, प्रति घण्टा तयार पपकर्न 67 किलो सम्म निम्त्याउने सक्षम छ।
यस्तो उपकरण अनुसार ग्राहकको आवश्यकता संग अनुरोध मा उपलब्ध छ। लाइन मड्यूलर छ र समावेश गर्न सक्छ:
पपकर्न खाना पकाउने लागि apparatuses ;
तटस्थ काम सतह र समर्थन;
यस तयार पपकर्न, Unopened मकै कर्नेल अलग डिजाइन विभाजकों;
तेल लागि dispensers;
toppings लागि dispensers;
Topping साथ तयार पपकर्न मिश्रण लागि Mixers।
इन्टरनेट विज्ञापन - नयाँ ग्राहकहरु थप स्रोत
प्रस्ताव नमूनाहरू। एउटा प्रस्ताव कसरी बनाउने?
नोवोसिबिर्स्क मा यातायात सेवा: ट्रकिंग
Vasily Zhukovsky: छोटो जीवनी र रचनात्मकता
हामी के समातिए उपनाम गर्न कुकुर कल गर्नुपर्छ
घर को कारण रूपमा, कि उहाँले आउन सक्छ
कसरी ठीक लेख्नुस्: सहायक वा सहायक?
केश फलाम मा बाल कसरी हावा? सजिलो
उपकरण "Almag-01": डाक्टर र contraindications पुस्तिका को समीक्षा
Kingsoft एंटीवायरस कसरी हटाउने? सुझावहरू